Archive du 12-oct-2020
Vavikely 12 taona feno hao Maty tampoka...
Ankizivavikely amerikanina iray vao 12 taona no namoy ny ainy noho ny resaka hao taminny lohany. Araka ny valim-pikarohana voalohany dia tratranny fitsaharanny fitemponny fo tampoka na arret cardiaque ilay zazavavikely io,
« Epilation au fil » : manala ireo volo mandady eo aminny tarehy
Ny teknika fanalana volomaso aminny alalanny kofehy no isanireo fomba antitra indrindra aminireo fanalana volo. Avy
Mihinana paoma 5 isan-kerinandro; miaro aminny homamiadana
Toerana iray anisanny ahitana karazana paoma eto amintsika. Toy ireo voankazo maro samihafa dia tombony maro ihany koa no azo avy aminny fihinanana azy ireny. Santionany aminizany ireto.
17 taona aho, misy lehilahy miaraka amiko, efa 3 taona izao.
Efa fantatry ny fianakaviana roa tonta izahay, fa ny raiko no tsy mankasitraka ny fiarahanay.
Mofo aminny amende Akora ilaina
Semoule na lafarinina mangahazo 500g · Siramamy 125g · Dibera nalefahina 50g · Hanitra 120ml (voasarimakirana) · Sira 1 tsongo · Amande nopotehina manify 150g · Siramamy 3sf · Hanitra 2 sf · Vovoka kanelina ½ sk Ho anny sirop : · Siramamy 500g · Rano 500ml · Hanitra 1 sf · Voasarimakirana · Tantely 150g
Lasopy aminny chou-fleur mitroka tavy
Mazàna sahirana rehefa manao régime misafidy izay sakafo tokony hohanina. Sakafo tena mety ho anny olona mampihena tena ny lasopy
Lasa aiza ry Craig David, Ozone.. ?
Ny mozika hono tsy mety lefy laza. Ireo mpanakanto kosa nefa dia matetika no adino tanteraka ny fisiany, rehefa tena mandeha ny fotoana.
Psoriasis : rehefa miofaka sy mangidihidy ny hoditra
Aretina miseho aminny alalanny firehetana mitarazoka (inflammation chroniques)
Shopping « Gasigasy »
1.Tapis en raphia Art Gasy Fandresena - Contact 034 90 819 97
Teknika manova ny vady tsy manome vola, tsy maneho fitiavana, tsy mitaiza
Tsy manampy ara-bola mihitsy izy, tsy manao raharaha, tsy manampy aminny fitaizana. Averiny foana ireo zavatra efa mampiady ao an-trano. Ireo karazana fahadisoam-pijery ao an-tokantrano koa anefa dia miteraka olana ary mety hiafara aminny fisarahana
Ambohimanga Rova Nirehitra ny ala nanodidina azy
Efa nidedaka ny afo vao samy taitra ny rehetra, omaly folakandro. Nirehitra mantsy ny ala teo ambanin'ny Rovan'Ambohimanga.
ANDRO ERAN-TANY HO ANNY ANKIZIVAVY Tsy sahy miteny ny 85% nireo voaolana
Isaky ny 11 oktobra no ankalazaina maneran-tany ny andro natokana ho anny ankizivavy. Nampisarahina ary tsy natambatra aminny andro eran-tany ho anny vehivavy izy io satria fantatra ihany koa fa manerana izao tontolo izao dia misedra olana manokana ny ankizivavy.
Ankadilalana Ankazondandy : Lehilahy roa maty nihotsahan'ny tany
Omaly tolakandro no nisehoan'ity tranga nampalahelo ity. Lehilahy roa no nodimandry vokatry ny fihotsahan'ny tany teny Ankadilalana Ankazondandy.
Barea de Madagascar Vononahiatrikany "Etalons" Burkinabé anio
Tonga soamantsaratany Maroc nyasabotsyteonyekipanasionalybaolinakitra Malagasy Barea de Madagascar. Nihazoavyhatranynyseranampiaramanidin'i Roissy Charles de Gaulle izyireotaorian'nyfandresenaazony tao Luxembourg
Cash point Antsirabe Nosoloin'ny jiolahy "mouchoir à jeter" ny vola
Cash point iray tao Ihazolava, tanàna iray mivoaka an'Ambatolampy raha ho any Antsirabe (RN7), no voasolokin'ireto jiolahy ny zoma lasa teo. Tonga teo amin'ity toerana ity ny lehilahy iray. Nanontany sao very vola ilay mpanao cash point satria nisy vola latsaka hitany teo akaikin'ny tsenany.
Covid-19 Tsy nisy maty tao anatinny 2 andro
Toy izao indray ny fivoaranny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara ny faranny herinandro teo raha ny tatitra nentinny Profesora VOLOLONTIANA Hanta.
Dax FC Feno herintaona omaly
Feno herintaona omaly ny sekoly Fampianarana baolina kitra Dax FC Ambohimanarina.
Fahasalaman'ny saina Hisy ny fizahana maimaimpoana
Hankalaza ny iray volan'ny fahasalaman' ny saina isika eto Madagasikara amin'ity volana Oktobra ity. Ho an'ny Faritra Analamanga manokana dia natomboka tamin'ny fikaonan-doha mikasika ny fankalazana ny andro manerantany hiadiana amin'ny aretin-tsaina ny fankalazana.
Fanaovana ZUMBA Nisokatra ny L Danse
Fikolokoloam-batana, fitsinjovana ny fahasalamana ary fanatanjahantena ny zumba, raha araka ny fanazavan-dRabezozoro Lalaina, tomponandraikitra voalohany eo anivonny L Danse. Ny zumba hoy ihany koa izy dia dihy anaty fanatanjahantena